ကောင်မလေးတွေ ကြွေစေဖို့ – Gentleman Magazine
ယောက်ျား တော်တော်များများဟာ မိန်းကလေးတွေကို ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရမလဲဆိုတာ သိတယ်ထင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေကို တကယ်ဆွဲဆောင်တဲ့အရာတွေက ယောက်ျားတွေအထင်နဲ့ လွဲနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်နဲ့ မဂ္ဂဇင်းတော်တော်များများဟာ ဗလတောင့်တောင့် ယောက်ျားပီသတဲ့သူတွေကို မိန်းကလေးတွေ ကြွေတယ် ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ် မိန်းကလေးတွေကို စစ်တမ်းကောက်ကြည့်တော့ သူတို့ကို တကယ်ကြွေစေတာက ကျွန်တော်တို့ မထင်ထားတဲ့ ထူးခြားတဲ့ အချက်လေးတွေ ပါနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မစဉ်းစားမိတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ကြွေတဲ့ အချက် ၁၂ ချက်ကို အောက်မှာရေးပြထားပါတယ်။
၁. အဝတ်အစားကို ဂရုစိုက်တတ်ခြင်း
ယောက်ျားလေးတွေက အဝတ်အစားကို အရမ်းဂရုမစိုက်တတ်ကြပါဘူး။ ညစ်ပါတ်မနေရင် ရပြီ ထင်ကြပေမယ့် မိန်းကလေးတွေကတော့ အဝတ်အစားဂရုစိုက်တဲ့ ကောင်လေးတွေကို ကြွေတတ်ကြပါတယ်။ ဘောင်းဘီတိုတွေ ဂျင်းဘောင်းဘီ အကျပ်တွေကို စတိုင်ကျကျဝတ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေကို မိန်းကလေးတွေ ကြွေကြဖို့ ရာနှုန်းပြည့် သေချာပါတယ်။
ဒါကတော့ အထူးအထွေ ပြောစရာမလိုပါဘူး။ ချစ်သူရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာလှဲနေရပြီး သူ့ရဲ့ဆံပင်လေးတွေကို သပ်ပေးတာခံနေရတာ မိန်းကလေးတွေအတွက် နိဗ္ဗာန်ပါပဲ။ ချစ်သူလေးရဲ့ ခေါင်းလေးကို နှိပ်ပေးကြည့်ပါ။ မိန်းကလေးတွေ အရမ်းကြွေတဲ့ အပြုအမူလေးပေါ့။
၃. စိတ်ရှည်ရှည် ပြေပြေလည်လည် စကားပြောပေးခြင်း
အငြင်းမသန်ပဲ ပြေပြေလည်လည် စကားပြောတတ်တဲ့သူတွေကို လူတိုင်းသဘောကျပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေအတွက် အမှန်ကိုလက်မခံပဲ အတင်းကတ်တီးကတ်ဖဲ့ စကားပြောတတ်တဲ့သူတွေက အမြင်ကပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးပါ။ စကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တဲ့သူတွေကိုတော့ ကြွေမှာ မလွဲပါဘူး။
အစားကောင်းကောင်း မကြိုက်တဲ့သူ မရှိပါဘူး။ ဟင်းကောင်းကောင်းတစ်ခွက်လောက် ချက်ပြလိုက်နိုင်ရင် ကောင်မလေးတွေ သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ မနက်စောစော ချစ်သူမနိုးခင် အရင်ထပြီး မနက်စာပြင်ပေးထားတာမျိုးဆို ကြွေသွားမှာ အသေအချာပါ။ ကော်ဖီလေးတစ်ခွက် ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
၅. တခြား ဖြောင့်တဲ့ကောင်တွေကို လက်ခံပေးခြင်း
ဒါက နည်းနည်းထူးခြားပါတယ်။ တခြား ဖြောင့်တဲ့ကောင်တွေကို အပြစ်မပြောပဲ လက်ခံပေးနိုင်တဲ့ ကောင်လေးတွေကို မိန်းကလေးတွေ သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ တခြားဖြောင့်တဲ့ကောင်တွေတွေ့တိုင်း “ဂေးပါကွာ” ပဲပြောနေရင် မနာလိုစိတ် အရမ်းကြီးတယ် ထင်သွားပါလိမ့်မယ်။
၆. တိရိစ္ဆာန် ချစ်တတ်ခြင်း
ခွေးလေး၊ ကြောင်လေးတွေကို စကားပြောကြည့်ပါ။ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အသံနဲ့ပေါ့။ အဲဒါမျိုးကို မိန်းကလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုတာ တော်တော်ထူးဆန်းပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုချစ်တတ်ပြီး သူတို့နဲ့ ကစားတတ်တဲ့ ကောင်လေးတွေက ဆွဲဆောင်မှု အရမ်းရှိပါတယ်.. တဲ့။
ယောက်ျားတော်တော်များများက မကချင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်ရင် မိန်းကလေးတွေရှေ့မှာ အမှတ်ပိုရမှာပါ။ ကဖို့ အရမ်းမရှက်ပါနဲ့။ မီးဖိုချောင်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် ကကြည့်လိုက်ပါ။
တခြားသူတွေရဲ့ ဘဝကို စိတ်ဝင်စားပြီး စာဖတ်ဝါသနာပါတာကို မိန်းကလေးတွေ ကြိုက်ကြပါတယ်။
၉. အနံ့အသက် ကောင်းခြင်း
ယောက်ျားတော်တော်များများ သတိမထားမိတတ်ကြပါဘူး။ ကိုယ်နံ့မရှိရုံနဲ့ မရပါဘူး။ ကိုယ်နံ့ကောင်းနေဖို့လဲ လိုပါသေးတယ်။ ယောက်ျားလေးသုံးရေမွှေး တစ်ခုခုဝယ်သုံးပြီး မိန်းကလေးတွေ သတိထားမိလာမှာကို စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။
၁၀. သူတို့ကို နားထောင်ပေးတဲ့အခါ
မိန်းကလေးတွေက သူတို့စကား နားထောင်ပေးတာ ကြိုက်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ သဘောကျဖို့ဆို အဓိက အရေးအကြီးဆုံးက သူတို့ပြောနေတာကို စိတ်ပါလက်ပါ နားထောင်ပေးပါ။ အင်းအဲ ချည်း မလုပ်ပါနဲ့။ ပြန်ပြီးတော့ သေချာ ဆွေးနွေး စကားလိုက်ပြောပေးပါ။ အဲဒါက အားလုံးထဲမှာ အရေးအကြီးဆုံး အချက်ပါပဲ။
၁၁. သင့်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့သူတွေကို လေးစားခြင်း
ကြင်နာတတ်တဲ့သူတွေကို ကောင်မလေးတွေ သဘောကျပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင် တူတူသွားရင်တောင် စားပွဲထိုးကို လေးလေးစားစား ကြင်ကြင်နာနာ ဆက်ဆံပါ။ သင့်ချစ်သူ ကြွေသွားပါလိမ့်မယ်။
ထူးထူးခြားခြား အချက်တွေထဲက တစ်ခုကတော့ ကောင်မလေးတွေဟာ ကောင်လေးတွေ အိပ်ရာပြင်နေတာကို ထိုင်ကြည့်နေရတာ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ သူတို့ကြည့်လို့မဝဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အခုပဲ အိပ်ရာကောင်းကောင်းပြင်တတ်အေယင် ကျင့်လိုက်ပါတော့။
ယောကျား တျောတျောမြားမြားဟာ မိနျးကလေးတှကေို ဘယျလိုဆှဲဆောငျရမလဲဆိုတာ သိတယျထငျကွမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ မိနျးကလေးတှကေို တကယျဆှဲဆောငျတဲ့အရာတှကေ ယောကျားတှအေထငျနဲ့ လှဲနိုငျပါတယျ။ ရုပျရှငျနဲ့ မဂ်ဂဇငျးတျောတျောမြားမြားဟာ ဗလတောငျ့တောငျ့ ယောကျားပီသတဲ့သူတှကေို မိနျးကလေးတှေ ကွှတေယျ ပွောကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျ မိနျးကလေးတှကေို စဈတမျးကောကျကွညျ့တော့ သူတို့ကို တကယျကွှစေတောက ကြှနျတျောတို့ မထငျထားတဲ့ ထူးခွားတဲ့ အခကျြလေးတှေ ပါနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ မစဉျးစားမိတဲ့ မိနျးကလေးတှေ ကွှတေဲ့ အခကျြ ၁၂ ခကျြကို အောကျမှာရေးပွထားပါတယျ။
၁. အဝတျအစားကို ဂရုစိုကျတတျခွငျး
ယောကျားလေးတှကေ အဝတျအစားကို အရမျးဂရုမစိုကျတတျကွပါဘူး။ ညဈပါတျမနရေငျ ရပွီ ထငျကွပမေယျ့ မိနျးကလေးတှကေတော့ အဝတျအစားဂရုစိုကျတဲ့ ကောငျလေးတှကေို ကွှတေတျကွပါတယျ။ ဘောငျးဘီတိုတှေ ဂငျြးဘောငျးဘီ အကပျြတှကေို စတိုငျကကြဝြတျတတျတဲ့ ယောကျားလေးတှကေို မိနျးကလေးတှေ ကွှကွေဖို့ ရာနှုနျးပွညျ့ သခြောပါတယျ။
ဒါကတော့ အထူးအထှေ ပွောစရာမလိုပါဘူး။ ခဈြသူရဲ့ ရငျခှငျထဲမှာလှဲနရေပွီး သူ့ရဲ့ဆံပငျလေးတှကေို သပျပေးတာခံနရေတာ မိနျးကလေးတှအေတှကျ နိဗ်ဗာနျပါပဲ။ ခဈြသူလေးရဲ့ ခေါငျးလေးကို နှိပျပေးကွညျ့ပါ။ မိနျးကလေးတှေ အရမျးကွှတေဲ့ အပွုအမူလေးပေါ့။
၃. စိတျရှညျရှညျ ပွပွေလေညျလညျ စကားပွောပေးခွငျး
အငွငျးမသနျပဲ ပွပွေလေညျလညျ စကားပွောတတျတဲ့သူတှကေို လူတိုငျးသဘောကပြါတယျ။ မိနျးကလေးတှအေတှကျ အမှနျကိုလကျမခံပဲ အတငျးကတျတီးကတျဖဲ့ စကားပွောတတျတဲ့သူတှကေ အမွငျကပျဖို့ အကောငျးဆုံးပါ။ စကားကောငျးကောငျးပွောတတျတဲ့သူတှကေိုတော့ ကွှမှော မလှဲပါဘူး။
အစားကောငျးကောငျး မကွိုကျတဲ့သူ မရှိပါဘူး။ ဟငျးကောငျးကောငျးတဈခှကျလောကျ ခကျြပွလိုကျနိုငျရငျ ကောငျမလေးတှေ သဘောကတြတျကွပါတယျ။ မနကျစောစော ခဈြသူမနိုးခငျ အရငျထပွီး မနကျစာပွငျပေးထားတာမြိုးဆို ကွှသှေားမှာ အသအေခြာပါ။ ကျောဖီလေးတဈခှကျ ဖွဈဖွဈပေါ့။
၅. တခွား ဖွောငျ့တဲ့ကောငျတှကေို လကျခံပေးခွငျး
ဒါက နညျးနညျးထူးခွားပါတယျ။ တခွား ဖွောငျ့တဲ့ကောငျတှကေို အပွဈမပွောပဲ လကျခံပေးနိုငျတဲ့ ကောငျလေးတှကေို မိနျးကလေးတှေ သဘောကတြတျကွပါတယျ။ တခွားဖွောငျ့တဲ့ကောငျတှတှေတေို့ငျး “ဂေးပါကှာ” ပဲပွောနရေငျ မနာလိုစိတျ အရမျးကွီးတယျ ထငျသှားပါလိမျ့မယျ။
၆. တိရိစ်ဆာနျ ခဈြတတျခွငျး
ခှေးလေး၊ ကွောငျလေးတှကေို စကားပွောကွညျ့ပါ။ ရယျစရာကောငျးတဲ့ အသံနဲ့ပေါ့။ အဲဒါမြိုးကို မိနျးကလေးတှကွေိုကျတယျဆိုတာ တျောတျောထူးဆနျးပါတယျ။ တိရစ်ဆာနျလေးတှကေိုခဈြတတျပွီး သူတို့နဲ့ ကစားတတျတဲ့ ကောငျလေးတှကေ ဆှဲဆောငျမှု အရမျးရှိပါတယျ.. တဲ့။
ယောကျားတျောတျောမြားမြားက မကခငျြကွပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ပြျောပြျောရှငျရှငျ လှတျလှတျလပျလပျနတေတျရငျ မိနျးကလေးတှရှေမှေ့ာ အမှတျပိုရမှာပါ။ ကဖို့ အရမျးမရှကျပါနဲ့။ မီးဖိုခြောငျထဲမှာဖွဈဖွဈ ကကွညျ့လိုကျပါ။
တခွားသူတှရေဲ့ ဘဝကို စိတျဝငျစားပွီး စာဖတျဝါသနာပါတာကို မိနျးကလေးတှေ ကွိုကျကွပါတယျ။
၉. အနံ့အသကျ ကောငျးခွငျး
ယောကျားတျောတျောမြားမြား သတိမထားမိတတျကွပါဘူး။ ကိုယျနံ့မရှိရုံနဲ့ မရပါဘူး။ ကိုယျနံ့ကောငျးနဖေို့လဲ လိုပါသေးတယျ။ ယောကျားလေးသုံးရမှေေး တဈခုခုဝယျသုံးပွီး မိနျးကလေးတှေ သတိထားမိလာမှာကို စောငျ့ကွညျ့လိုကျပါ။
၁၀. သူတို့ကို နားထောငျပေးတဲ့အခါ
မိနျးကလေးတှကေ သူတို့စကား နားထောငျပေးတာ ကွိုကျပါတယျ။ မိနျးကလေးတှေ သဘောကဖြို့ဆို အဓိက အရေးအကွီးဆုံးက သူတို့ပွောနတောကို စိတျပါလကျပါ နားထောငျပေးပါ။ အငျးအဲ ခညျြး မလုပျပါနဲ့။ ပွနျပွီးတော့ သခြော ဆှေးနှေး စကားလိုကျပွောပေးပါ။ အဲဒါက အားလုံးထဲမှာ အရေးအကွီးဆုံး အခကျြပါပဲ။
၁၁. သငျ့အတှကျ အလုပျလုပျပေးတဲ့သူတှကေို လေးစားခွငျး
ကွငျနာတတျတဲ့သူတှကေို ကောငျမလေးတှေ သဘောကပြါတယျ။ စားသောကျဆိုငျ တူတူသှားရငျတောငျ စားပှဲထိုးကို လေးလေးစားစား ကွငျကွငျနာနာ ဆကျဆံပါ။ သငျ့ချဈသူ ကွှသှေားပါလိမျ့မယျ။
ထူးထူးခွားခွား အခကျြတှထေဲက တဈခုကတော့ ကောငျမလေးတှဟော ကောငျလေးတှေ အိပျရာပွငျနတောကို ထိုငျကွညျ့နရေတာ အရမျးကွိုကျပါတယျ။ သူတို့ကွညျ့လို့မဝဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ အခုပဲ အိပျရာကောငျးကောငျးပွငျတတျအယေငျ ကငျြ့လိုကျပါတော့။
Previous: ဆိုက်ဒ်သေးတာက စိတ်ညစ်စရာမဟုတ်ပါဘူး
Next: စိတ်ဝင်စားမှုကို ရယူနိုင်ဖို့ အရည်အသွေး(၇)ခု